Ny Tsy Hakàna Tahaka Fahatany Ny Lahatsoratra GV Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2019 4:39 GMT
ISary avy amin'ny Wikimedia Commons. Sehatra ho an'ny daholobe.
Oadray, ny hatezerana teo amin'ny fantsona WhatsApp -n'ny Global Voices tamin'ity maraina ity, rehefa injay Owen Guo, iray tamin'ireo Sinoa mpiara-miasa aminay, nampiato ny andiana sary mikasika ireo sakafo maraina, ireo sarin-tsaka mampihomehy, ireo hanihany ary fosafosa erantany mba hitaterana fandikàna manontolo ireo andàlana avy amin'ny lahatsorany hoe Ahoana ny fihetsiky ny Vehivavy Iray nanoloana ny Zavona Sinoa, tsy nosoratana ny anaran'ny tompony, tao anatin’ny lahatsoratra iray an'ny mpanoratry ny Guardian, Mark Tran.
Nisy olona iray izay noahiahianay fa nandady nody avy any amin'ny trano fisotroan-toaka (fa na ny fitendriny aza nanevateva ) nanontany hoe ahoana no nahafahan'i Owen nanao hosoka ny solosainan'ny mpanoratra iray ao amin'ny Guardian. Saingy ho an'ireo tena hary saina kokoa taminay, efa nibaribary toy ny masoandro be lohataona ny fahamarinana mahatsiravina: hala-tahaka io, tsotra sy mazava.
Tsy vao sambany akory no nisy mpanao gazety nitroka ampahany manontolo avy amin'ny Global Voices tsy nitanisàny ny tompony. Fantatray fa ho an'ireo mpanao gazety marobe, izahay no loharanon-kevitra manan-danja indrindra amin'ireo tantara sy ireo vaovao eo an-toerana. Ny olana, dia noho izahay tsy mihontsona manoloana ireo olona mampiasa ny vontoaty anay sy ny fanànanay politika Fanomezan-dalana tena malalaka be loatra izay ahazoan'ny sasany “mizara, mamoaka indray, mandika na mamerina” ireo tantaranay, raha tsy ohatra hoe nitaky taminay izany izy ireo. Nisafidy ny hanao io fomba io izahay satria irianay mba ho voavaky ireo tantara izay tantarainay ary mba ho marobe araka izay tratra ny olona hizara azy. Izay no antony mahafaly anay rehefa mba voatanisan'ireo media goavana ny asanay, hita taratra, nasiana rohy na naverin-dry zareo navoaka indray.
Fantatray fa tsy misy zava-baovao eto ambanin'ny masoandro ary manana faktiora tsy maintsy aloa vola tahaka ny olona rehetra ireo mpanao gazety. Raha toa dia efa mihoatra ny fetra kosa ireo fitoviana mahagaga misy eo amin'izay lazaina sy ny firafitr'ireo lahatsoratray ary ireo izay mipoitra any anatin'ireo media mahazatra, matetika avelanay hijanona amin'izao ilay izy. Saingy tena tsy fahalalam-pomba tsy hay faritana ny fakàna an'ireo andalana manontolo avy amin'ireo lahatsoratray sy ny fanitrihana azy ireo ho any anatin'ny lahatsoratrareo manokana sy ny fanamarihana azy ho asanareo manokana:
Ho azy, namaly i M. Tran rehefa nantsoinay sady nanampy fanamarihana tany amin'ny faran'ny fitantaràny, karazana andalana milaza ny maha-an'i Owen ireo andàlana nangalariny. Tsy afaka ny hilaza izahay hoe hitanay ho tena mahafa-po io, saingy firehana anaty tena maneho ny maha-olona ny fikasàna hanavotra ny endrika.
Fa tokony ho ataon'ireo mpanao gazety izay mikasa ny hangalatra ny asan'ny Global Voices any an-tsaina tsara amin'ny hoavy fa: vondrom-piarahamonina izay manana andiany maro an'isa io. Rehefa miteny aho hoe “miaina an-tambajotra” ireo olona ireo , tsy mila miteny amin'ny dikany ambadika aho. Ary ny miantso GVers sasantsasany ho “mpahay teknolojia” dia fanamaivanana faratampony. Resy lahatra aho fa misy aza amintsika manana androida vitsivitsy.
Izay tiana ho lazaina dia hoe ao anatin'ny fotoana fohy, ho tratra ny adalanareo. Ary angamba tsy maintsy ambara. Noho izany, halaviro ny henatra ary hajao ny politikanay amin'ny Fahazoan-dalana.